Marti galinta ama VPS Latin America, Mareykanka ama Yurub? | Laga soo bilaabo Linux
Marti galinta ama VPS Latin America, Mareykanka ama Yurub?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Kuwa kale
Thanks to DesdeLinux Waxaan la kulmay (run ahaantii) dad ka kala yimid wadamo badan, qaar badan oo ka mid ah had iyo jeer waxay qabaan walwal ama su'aalo ku saabsan DesdeLinux, oo ku saabsan hawlgalkiisa, adeegeeda, iwm. Muddo aan fogeyn saaxiib ayaa i weydiistay inaan ka helo isaga oo dalkiisa marti ku ah, waan ka fikiray Marti galiya Uruguay, ayaa ii sheegay in adeegyada sida Hostgator kuwaas oo xafiisyadooda ku leh Mareykanka ama Yurub, wuxuu igu yidhi: «waxa aan sameyno ayaa ah mid lagu kalsoonaan karo, waxaan ka doorbidayaa adeegga Latin-ka mid ka mid ah dadka aan ku hadlin afkayga«, Oo waxay leedahay dhibic.
Markii aan ka bilawnay DesdeLinux annaga (elav iyo I) wax badan ayaan ka ogaanay shabakadaha iyo server-yada, laakiin waxba kama qabano martigelinta, iibsashada internetka, bixiyeyaasha, iwm. Intii lagu gudajiray 2daan sano waa inaan wax ka baranaa tan, howshana waxaan kusoo marnay adeeg bixiyeyaal kala duwan (sheeko aan horay kuugu soo sheegay) qaar ka xun kuwa kale, wax walba ilaa mid ku habboon raadso oo hayso.
1 Marti gelinta Yurub
2 Martigelinta Latino
3 Marti gelinta Mareykanka
4 Haddaba maxaa gabagabo ah?
Marti gelinta Yurub
Kahor intaanan haysan VPS oo leh adeeg bixiye Jarmal ah, runti sifiican ayey noogu shaqaysay, 99% waqtigeedii, sidaa darteed khibradayada aan la lahaanay bixiyeyaasha Yurub ilaa hadda way fiicnayd. Dhinaca kale, waxaan ka aqrinay faallooyin dhowr ah oo ku saabsan adeegga martigelinta 1and1 oo aan gebi ahaanba fiicneyn, ma garanayo shirkaddan Isbaanishka ah ee ay ku yaalliin xarumahooda xogta.
Marti gelinta ugu horeysa ee Laatiin ah ee aan maqlo waxay ka timid IguanaHosting, oo la xiray ____________________. Waqtigan xaadirka ah dhammaan adeegyadeena waxaa lagu martigaliyaa server-yada GNUTransfer, shirkad ka socota isla bulshada ku hadasha Isbaanishka (Argentina) oo leh adeegeyaasheeda DataCenter-ka Mareykanka, wax dhibaato ah nama soo food saarin, feejignaanta kama yarayn wax fiican, adeeg tayada.
Weligay ma maqal fikradaha wanaagsan ee ku saabsan IguanaHosting, waxaan ula jeedaa fikradaha farsamada ... marar badan ayay u dulqaadan kari waayeen wareejinta ama rarka, adeegyadooda ayaa had iyo jeer hoos loo dhigaa, iwm. Waxaa laga yaabaa in dhibaatadu ay ahayd in adeegeyaashoodu ay jidh ahaan ku yaalliin Latin America oo ayan ku jirin Yurub ama USA.
Marti gelinta Mareykanka
Shirkadaha sida Hostgator-ka caanka ah iyo kuwa kale oo badan waxay ku leeyihiin xafiisyadooda DataCenters-ka Mareykanka, taas oo damaanad qaadaysa xarig ballac wanaagsan, haa, laakiin qiimahoodu marna ma ahan kuwa ugu raqiisan (liddi ahaan, way qaali yihiin) iyo sidoo kale, waa naadir dhif ah inaad ka heli karto xoogaa shakhsi ah, 'khaas ah' ama daaweyn ka duwan macaamiisha kale. Taasi waa, iyaga ahaan waxaad u tahay macmiil sida kuwa kale, maheli doontid daaweyn mudnaan leh, waxbadan oo kayar, iyo waliba ... markii aad dhibaato u keento (sida inaad kaheysato ilo badan adeegyadooda) waxay kuu sheegi doonaan inaad adigu waa inuu bixiyaa inbadan, kordhinta qorshaha, ama wax had iyo jeer tarjumaya kordhinta tirada lacagta ee ay tahay inaad siiso.
Tani waxay ahayd waayo-aragnimadeena Hostgator iyo A2Hosting Waqti hore. Uma dhahayo inay iyagu yihiin kuwa ugu xun, waxaan si fudud u sheegayaa in VPS-du ay qaali xad dhaaf ah iyo sida haddii taasi aysan ku filnayn, adeeggooda martigelinta aysan taageeri karin dhowr kun oo booqasho maalin kasta ... haddii waqtigaas aysan taageeri karin 10.000 ama 15.000 booqashooyin kasta 24 saacado, Ma garanayo waxa lagu samayn lahaa in ka badan 40.000 oo aan hadda haysanno.
Haddaba maxaa gabagabo ah?
Marti gelinta ama VPS? : Marka hore, haddii aadan haysan raasamaal ballaaran waa inaad isweydiisaa, Miyaan u baahanahay VPS (server dalwad ah) ama kaliya Hosting?
Windows ama Linux? : Tani waxay la xiriirtaa nooca bogga aad qorsheyneyso inaad yeelato (asp, php, iwm). Haddii aad go'aansato inaad iibsato VPS tani waa su'aal ay tahay inaad isweydiiso naftaada, Miyaan u baahanahay VPS oo leh Linux ama Windows?
NSA ... amniga? Kadib, waxkastoo aad go aansato, waa inaad isweydiisaa inaad ka mid tahay dadka isticmaala ee aaminsan fikradaha shirqoolka, ee daneeya amnigooda iyo in NSA (FBI, CIA, iwm) aysan arki karin xogtooda 😉. Haddii ay sidan tahay, kuguma talinayo adeeg bixiye in uu ku haysto adeegyadiisa ciidda Mareykanka, maxaa yeelay ma dareemi doontid kalsooni buuxda maskaxdaada, waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah oo leh adeegeyaasheeda Yurub ama Latin Ameerika uu noqon karo xalkaaga.
Ingiriis? : Midda kale oo waa muhiim in la ogaado haddii aad si fiican ugu hadasho Ingiriisiga iyo in kale. Haddii aadan ku hadli karin Ingiriisiga, waxaan hubaa inaan kugula talinayo adeeg bixiye martigelinaya aaggeenna ama Isbaanish, taas oo ah, ku hadal Isbaanish. Uma baahnin inaan ku tiirsanaano GNUT wareejinta taageerada farsamada ee VPS-keena maxaa yeelay adeeggu waa mid aan fiicnayn, laakiin markii aan la joognay bixiyeyaasha kale (oo aan marti-gelinno oo aan ahayn vps) waxay ahayd inaan had iyo jeer la hadalno (tikidhada, livechat, iwm.) Oo ay taageerayaan farsamo yaqaan si uu u arko dhibaatooyinka na haystay, su'aalaha, iwm, iyo WAX KASTA oo af Ingiriis ku jiray. Marka, haddii aad taqaanid Ingiriisiga (ama aad qaadato barta tarjumaadda Google) wax dhibaato ah kuma lahaan doontid la xiriirka iyo la dagaallanka adeeg bixiyahaaga, halka haddii aadan ku hadlin Ingiriisiga waxoogaa dhibaato ah kaa gaarto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Kuwa kale » Marti galinta ama VPS Latin America, Mareykanka ama Yurub?
19 faallooyin, ka tag taada
Waqti dheer 3000 dijo
Waxaan haystaa lug ku taal Chicago, taas oo i siisay adeegga martigelinta wanaagsan ee reer Samaariya (Anigu waxaan daryeelaa domainka, in kasta oo shaqsiyan ay ahayd inaan u haajiro GoDaddy maxaa yeelay mahadsanidiisa rasiidhka ah waxaan hayn karaa bogga sanadle ah anigoon haysan dhibaatooyinka ka yimaada Xalka Shabakada).
Lafteeda, waxa waqtiga iga qaadanayay waxay raadinayaan shaqo joogto ah, tan iyo dhawaanahan waxaan xaqiiqsaday in cusbooneysiinta domainka adeegyada qaar (sida Network Solutions) ay aad qaali u tahay, GoDaddy-na waxay ku siineysaa fudeydka adeegsiga tigidhada si cusbooneysiinta domain aysan aheyn mid qaali ah.
Waxa aan ogaaday waa in VPS ay tahay in GNUTransfer ay mudan tahay in la bixiyo, maaddaama ay ka yihiin kuwo hufan dhinacaas oo adeeggooduna u jilicsan yahay bitcoins.
Sikastaba, qoraal wanaagsan.
Waxaan isticmaalaa Nominalia, anigoo adeegsanaya martigelintooda beer ku taal bergamo (talyaani) .Ma aha mid aad u jaban, laakiin adeeggu aad buu u wanaagsan yahay. Waxaan ka doorbiday Yurub sharciyadeeda ilaalinta xogta. salaan
Waxaan isticmaalaa oo aad baan kugula talinayaa http://www.host1plus.com/ kuwaas oo adeegeyaashoodu ku yaalliin Koonfur Afrika, Jarmalka, Brazil iyo USA.Qof walba wuu dooran karaa goobta uu ku martigelinayo VPS-kiisa.
Ku jawaab petercheco
Markaad aragto adeegyada aad haysato, waxay mudan tahay inaad maal gashato.
Waxaan ku lahaa boggeyga GoDaddy (Linux martigelinta) oo sifiican ayaan u shaqeynayay (ssh diyaar 🙂 laakiin maadaama ay ahayd mid aasaasi ah waxaan aaday DigitalOcean in kasta oo ay ka shaqo badan tahay maxaa yeelay waa VPS waan jeclahay intaan noolahay oo dhan waana bixiyaa isku mid ah 🙂
GoDaddy Waa hagaagsan tahay maxaa yeelay rasiidhyadooda runtii aniga ayey aniga ila shaqeeyaan, waxaana jira xitaa xayeysiisyo lagu cusbooneysiiyo xitaa lacagta maxalliga ah (taasna mahadsaniddeeda, waxaan awooday inaan ka guuro degelkeyga Shabakadaha Xalka ee aan la dabooli karin illaa adeegga aadka u wanaagsan ee GoDaddy).
Dhinaca martigelinta, degelkeygu waa la martigeliyey Halkan.
ka fogaansho dijo
DigitalOcean waa xiddigta toogashada cusub ee adduunka martigelinta, haddii aan fursad helo waxay noqon lahaayeen dookhayga koowaad.
Ku jawaab dhunter
Raphael Castro dijo
Linode marka hore, waayo-aragnimadayda. Mid kale oo heer sare ah waa RamNode
Jawaab Rafael Castro
Waxaan adeegsaday dhowr marti-geliye Jarmal ah waligeyna dhibaato kalama kulmin iyaga
Waa inaan kuu sheegaa in 1and1 uu yahay adeeg bixiye Jarmal ah, oo leh adeegeyaasheeda oo ku kala sugan marti-gelinno kala duwan Yurub oo dhan, "la waafajiyay", waxaan u dhigay xigashooyin, maxaa yeelay waxaan awooday inaan xaqiijiyo inay iyagu leeyihiin kuwa la mid ah, laakiin mararka qaarkood marka loo eego waddankee Waad isku xireysaa, marwalba waad marin kartaa oo haddii ay dhacdo, waxay ku siinaysaa qalad halkii aad ku tagi lahayd nuqul. 1and1 kii ugu xumaa ee SAU (Adeegga Feejignaanta Isticmaalaha), oo aan xirfad badan lahayn, oo haddii aad dhibaatooyin kala kulanto jawaabta ugu badan ayaa ah inay tahay codsigaaga haddii aadan isticmaalin tooda.
Ku jawaab mangel
Anigu ma ihi dhagar qabe, laakiin waxay si fudud ii dhibaysaa in dalal kale oo aaminsan inay iyagu leeyihiin adduunka ay ku samayn karaan wax alla wixii ay doonaan xogteenna.
Ku jawaab pepe
Carlos Ernest Pruna dijo
Waad salaaman tahay, shaqsiyan waxaan kugula talinayaa inaad wax ka weydiiso shirkada OVH aniga iyo dib u eegisyo badan ayaa ah lambarka 1 ISP ee aduunka oo bixiya adeegyo isugu jira adeegeyaal gaar ah, vps, iyo daruur u heellan et marka la barbardhigo gaboodfallada noocan oo kale ah ee ka jira have waxay leeyihiin xarumo xogeed oo ku kala yaal Yurub iyo Waqooyiga Ameerika …… .iyo adeeg macmiil oo dhakhso leh oo luqad kasta ah… ..Waxaan ku noolahay USA waxaanan leeyahay mid u gooniya oo ku yaal Waqooyiga Ameerika oo ku yaal Kanada oo leh proxmox rakibay hadana waxaan ka fakarayaa inaan kireysto mid lamid ah Yurub si aan muraayad uga sameeyo ...
Jawaab Carlos Ernesto Pruna
Ku jawaab synflag
Waxaan ku talinayaa http://bynoc.com Iyagu waa dad culus oo waxay daneeyaan macaamiishooda, ugu yaraan wax dhibaato ah kalama kulmin iyaga.
Ugu dambeyntiina, maxaad kula talinaysaa Latin America? hareeraha halkan khibrad xun oo leh dhammaan martigalinta Mareykanka
Waad salaaman tihiin, waan ogahay in aan ka daahay doodan, laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan ra'yigayga la wadaago. Runtu waxay tahay inaan ku raacsanahay saaxiibkaa reer Uruguay. Waxaan doorbidayaa inaan marti ka helo dalkayga oo leh adeegeyaasheeda oo ku yaal isla waddan. Waxaan ogaaday in sida ugu dhow ee adeeguhu u dhow yahay, sida ugu fiican ee boggeygu u socdo, iskaba daa caqabadda luqadeed. Waxaan joogaa Chile, aad ayaan ugu faraxsanahay martigelinta reer Chile ee aan haysto - Magaca martida - oo si fiican u shaqeeyay tan iyo markii aan shaqaalaysiiyay 5 sano ka hor.
Jawaab si aad uhesho
Haa, sidoo kale waxaan u baahanahay qof ii sheega bixiyeyaasha aan isku dayo. Mahadsanid!
ee 2015 oo aan la joogo https://bynoc.com mana aanan kala kulmin wax dhibaato ah iyaga, taageero fiican iyo dad aad saaxiibtinimo u leh.
Ku jawaab Cristian
Maqaal aad u wanaagsan,
Waxaan u maleynayaa in ujeedadu tahay in la raadsado shirkad martigalinaysa oo isku wadan ah,
Tusaale ahaan, haddii aad ka timid Peru, waxa ugu habboon ayaa noqon kara in bixiyaha martigelinaya uu ka yimaado Peru, maadaama aad jawaab deg-deg ah ka helayso iyo Isbaanish, hubi inay si sharci ah ugu dhexjirto Peru, oo ay ka muuqato SUNAT ayna leedahay ugu yaraan 5 sano oo waayo-aragnimo ah. , Shaqsiyan waan lashaqeeyaa martigelinta iyo domainka, Waxaan helaa caawimaad wanaagsan, markaan runtii u baahdo.
Deepin 2014 waxay qorsheyneysaa inay ku darto in ka badan 10 tarjumaad luqadeed oo cusub
Slowmovideo ama sida loo abuuro fiidiyoowyo gaabis ah